Christ Archives — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
uKrestu uKrestu uKrestu uKrestu uKrestu uKrestu uKrestu uKrestu uKrestu uKrestu uKrestu uKrestu uKrestu uKrestu
Wonke ngoku ke ndiza kuthetha ukuba umntu uthi bafuna ukuba ngumKristu, kodwa babonakala becinga ixesha alikho ilungelo. Xa ndibuza ukuba kutheni, ba ndi xelela ngazo zonke izono zabo, yonke kwiintsilelo babo, kwaye zonke izinto ubeko abayenzileyo ngaphambili. Andizange bathi nabo ngezono zabo, kodwa ndiya kwenza yokutyhiliza kokucingelwayo zabo.
Kwaye bona babecinga ukuba isono ithile ndiphuncukane nto ukuza uKristu, xa okwahlukileyo kuyinyaniso. Ukuba umoni aliyigcini kuKristu kuthi; oko Naso isizathu simfuna. Ukuba siyalinda sikhangele egqibeleleyo wamwola siza kukha alinde ngonaphakade.
Kwenye uphindo zam endizithandayo, Charles Spurgeon usibongoza ukuba bayeke ngokwethu ukuba, kunye nokuqalisa khangela kuYesu. Uthi:
"Le! Uthi, 'Ndiya akuthanga uguquke ngokwaneleyo.' Oko ujonge ukuba wena. 'Andikholelwa ngokwaneleyo.' Oko ujonge ukuba wena. 'Mna akakuboni.' Oko uzilumkela. 'Ndiya engafumani,'Utsho omnye, 'Ukuba unayo nayiphi na ubulungisa.' Kuyinto elungileyo ukuthi kuni na ubulungisa; kodwa kakhulu kuphosakele ukufuna nasiphi na. It…